14 Istaraatijiyadaha Kordhinta Dakhliga ee Goobtaada Ganacsi | Martech Zone
Talaado, September 16, 2014 Isniintii, September 15, 2014 Douglas Karr
Saaka waxaan wadaagnay 7 xeeladood oo loogu talagalay kordhinta kharashka macaamiisha ee goobta tafaariiqdaada. Waxaa jira farsamooyin ay tahay inaad ku daadiso goobtaada e-commerce sidoo kale! Dan Wang la wadaagay maqaal ku saabsan ficilada aad qaadi karto Kordhi qiimaha gawaarida dukaankaaga at Shopify iyo ReferralCandy ayaa sharraxay ficiladaas ku jira sawir-gacmeedkan.
Hagaaji naqshadda dukaankaaga adoo ururinaya jawaab celin iyo tijaabinta isbedelada mawduuca.
Samee Bixitaan si looga dhaadhiciyo dadka soo booqda inay is badalaan kahor intaysan bixin.
Isticmaal Email si xushmad leh si loo wado taraafikada dukaankaaga loona abuuro iib ka fiican kan warbaahinta bulshada.
Xidhiidh Badan La Samee adoo u diraya joornaallo joogto ah heshiisyo iyo qiimo dhimis.
Tayaynta Ad-Bixinta adoo tijaabinaya oo keywords keyword kala duwan si aad sifiican ugu beegsato ololayaashaada.
Kireyso Cadeynta Bulshada adoo waydiisanaya isla markaana ilaalinaya dib u eegista iyo qiimeynta alaabtaada.
Ka filo Iibka Mustaqbalka adoo ku daraya sheyada wixii ka baxsan sidii loo qiyaasi lahaa dulsaarka.
Alaabada La Iibiyo adoo soo bandhigaya alaabooyin laxiriira oo kujira qiime kala duwan.
Yaree Ka Tagaya Gawaarida adoo adeegsanaya emaylka iyo barnaamijyada soo-kabashada ee xayeysiinta martida inay ku noqdaan gawaaridooda.
Xusuusin Rabitaan waa email nudges oo qofka ku kaxeeya inuu wax iibsado. Kudar iibka ama iibso info si aad u kordhiso xiisaha.
Ku dar Qeybta Hadiyadaha leh alaabooyin gaar ah. Waxay caadi ahaan kordhiyaan xadadka faa'iidada!
Daahfurka Bakhaarka Facebook si toos ah loogu iibiyo dadka isticmaala Facebook isla markaana si ballaadhan loogu soo bandhigo warbaahinta bulshada.
La shaqee barta Instagram adoo ordaya tartamo, muujiya gadaasha shaqada, iyo la wadaagida sawirada macaamiisha alaabadaada.
Dhiirrigalinta Erey-Afka adoo raadinaya oo abaalmarinaya saamileyaal gaari kara bartilmaameedkaaga bartilmaameedka ah.
Iyadoo wararkii ugu dambeeyay ee Apple Pay, Waxaan sidoo kale ku dari lahaa ku darista habab u oggolaanaya sahaminta fudud, wax iibsiga iyo wax ku iibsiga taleefanka gacanta waxay noqon kartaa mid ka mid ah xeeladaha ugu muhiimsan ee maanta lagu wado wadista iibsi badan!
Tags: ad-kharash garayntaKa tagida gaadhigaHagaajinta beddelkamacmiilku qarash gareeyoiyo wangecommercenaqshadeynta ecommerceemaylka e-commercefikradaha ecommercehagaajinta ecommercebixitaanka bixitaankaFacebookiibinta mustaqbalkahadiyadhibokordhi gawaarida dukaameysigakordhi qiimaha gaarigakordhin kharashkaInstagramxulashada ereyga muhiimka ahqarash gareynta internetkaalaab la'aanyaree ka tagida gawaaridayaree ka tagida gaarigadukaankagaadhigiina shoppingcaddayn bulshonaqshadda dukaankaBarcaerayga afka